Goolashii Qaalma Rogodka Ahaa Oo Ku Yaraaday Kubada Cagta (SABABTA) – Garsoore Sports
Goolashii Qaalma Rogodka…
Marka loo eego xirfadyahanada Kubbada-cagta Ee hadda Garoomada ku jira ayaa waxa ka wanaagsanaa kuwii iyaga Garoonka uga soo horreeyay.
Taas ayaa dood badan ka dhalin karaan akhristayaasha,balse waxaa hubaal ah in la isku qiimeyn karo Qaabka Goysmada,Kubbadaha loo tuuro Gediska Garbaha,Darbooyinka meelaha Fog laga hago iyo Dhalinta Goolasha Ee nuucyada kala duwan lahaa.
Horyaalka Seria A-da Talyaaniga ayaa ahaa 10 Sano iyo wixii kahorreeyay mid Goolasha ugu quruxda badnaa laga diiwaangelin jiray sida Laba lugaaleyda Goolasha ahaa Ama goolasha Qaalma rogodka loo dhaliyo.
Laadad-ka xorta ah ee Xirfadaha watay ee la dhalin jiray iyo Kubbadaha Teestooyinka ama Madaxa lagu dhaliyo oo nuucyo kala duwan lahaa ayaa la tabay, Sidoo kale Darbooyinka fog fog ee la dhaliyo waayahaan Indhaheenu ma aysan qaban.
Inkastoo Dhalinyaro badan ay Ciyaaraha kusoo biireen Dheesha iyo Daawashadaba haddana wax na qanciya waayahaan oo xirfad lagu soo bandhigo lama arag, tusaale ahaan Ronaldinho,Ronaldo,Zidane,Pirlo iyo Kuwo kale wixii ay Garoomada kasoo dhigeen weli baddelkooda lama arko.
Cristiano Ronaldo iyo Leo Messi waa kuwo is xifaaleyn jiray oo kuvbado qurux badan iskugu faani jiray hadana CR7 Ayaa Gool Qaalmo Rogod ahaa ka dhaliyey Juventusta hadda uu la joogo weli mid kaa lamid ah waayahaan lama dhalin.
Xilligaas Ronaldo Cristiano waxa uu katirsanaa Real Madrid waxaana Qormadaan aan dib ugu milicsanay inay indhaheena uxiiseen goolashii lagu dhalin jiray Labaaleyda ama Dhabalka waxa loo yaqaano ee labada lug iyadoo lasii jeedo lagu dhaliyo.